Soomaaliya oo yeelaneysa xarunta isweydaarsiga Internet-ka – Kalfadhi
Soomaaliya oo yeelaneysa xarunta isweydaarsiga Internet-ka
Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay qorsheynaysa in ay hirgiliso xarunta isweydaarsiga internet-ka ee loo yaqaaano Internet exchange point (IEP) taasi oo gacan weyn ka geysan doonta in ay isku xirmaan shirkaddaha bixiya adeegga internet-ka.
Wasaarada Boostada,Isgaarsiinta iyo Tiknoolijiyada ayaa billowday dhismaha xaruntan oo laga sameynayo caasimada Muqdisho.
‘’ Adeeggan waxaan dooneynaa in uu noqdo mid la wada leeyahay oo yaalla meel dhex dhexaad ah oo la wada horumariyo,’’ ayuu yiri wasiirka Boostada mudane,Cabdi Canshuur Xasan.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa hore u ansixiyay sharciga isgaarsiinta si wax badan looga qabto adeegyada la xiriira isgaarsiinta ee ay imminka bixiyan sharkaddo si gaar ah loo leeyahay.
Gudoomiye Mursal oo maanta tagi doona magaalada Baydhabo
Wasaarada maaliyadda oo Xarumo garsoor maanta ka hirgelisay Kismaayo